St. Helena bụ onye Britain, onye Afrịka, enweghị COVID yana ugbu a ejikọtara Google
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » St. Helena bụ onye Britain, onye Afrịka, enweghị COVID yana ugbu a ejikọtara Google
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
N'afọ 2018 St.
Okwu nkwukọrịta gbochiri mpaghara mpaghara Britain a na Oke Osimiri Atlantic iji jikọọ.
Taa na -egosi obere oge n'akụkọ ihe mere eme dijitalụ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri Google nke Equiano okpuru mmiri ikuku ikuku n'agwaetiti St Helena nke dị na South Atlantic Ocean, na -eme mpaghara a dịpụrụ adịpụ nke British Overseas Territory mbụ n'ọdụ ụgbọ mmiri mbụ maka ọrụ Equiano n'etiti Europe na ndịda Africa.
N'ọnwa Disemba 2019, gọọmentị St Helena (SHG) bịanyere aka na nkwekọrịta ijikọ St Helena Island na eriri ịntanetị nke Equiano undersea, na-ebuga St Helena ọsọ ọsọ mbụ, njikọ fiber-optic.
Nke a bụ akara teknụzụ ọhụrụ maka agwaetiti nke abụọ kacha dịpụrụ adịpụ n'ụwa ga -enwe nnukwu mmetụta ọ bụghị naanị na ndụ ndị bi kwa ụbọchị, kamakwa n'ikike ya ịdọrọ itinye ego n'ime na njem.
Saint Helena bụ ihe onwunwe Britain nke dị na Oke Osimiri South Atlantic.
Google ka jikọtara St. Helena dịka Mpaghara Njem Nleta Anyanwụ Africa nke Britain
Ruo ugbu a COVID-19 amabeghị na mpaghara a dịpụrụ adịpụ nke ụwa.
Agwaetiti a nke ugwu mgbawa dịpụrụ adịpụ dị ihe dị ka kilomita 1,950 (1,210 mi) ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri ndịda ọdịda anyanwụ Africa, yana kilomita 4,000 (2,500 mi) n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Rio de Janeiro n'ụsọ oké osimiri South America.
Ụgbọ mmiri oyi akwa Teliri, na -ebu eriri, si na Walvis Bay na 31 Ọgọst 2021 na Rupert's Bay. A tụpụrụ ọdụ ụgbọ ahụ n'akụkụ ụgbọ mmiri ahụ, ndị na-egwu mmiri wee tinye eriri ahụ n'ime ọkpọkọ a kwadebere nke ọma, malite n'elekere isii nke ụtụtụ taa. E tinyere ngwụcha eriri ahụ na ọdụ ọdụ ụgbọ ala modular (MCLS) dị na Rupert, ebe eriri ga -ejikọ na akụrụngwa dijitalụ agwaetiti ahụ. Na mbido ọnwa a, ndị ọrụ mmadụ iri na abụọ bịarutere site na ụgbọ elu ụgbọ elu si UK, France, Greece na Bulgaria iji mee ka ọ dị mfe ịdata eriri ma nwalee akụrụngwa inye ọkụ n'ime ọdụ ụgbọ elu.
Damian Burns, onye isi mmepe mmepe SHG kwuru, sị: “Ọrụ a bụ ihe dị mkpa na St Helena's Digital Strategy na ọ kwesịrị ime nnukwu mgbanwe na ndụ ndị bi na anyị kwa ụbọchị. Ekwesịrị ịgbanwere ohere agụmakwụkwọ dị n'ịntanetị, ohere itinye ego ọhụrụ ga -emepe, ndị bi n'àgwàetiti kwesịrị ịnweta ohere telemedicine ka mma, anyị ga -enwe ike ịdọrọ ndị nomads dijitalụ n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Burns ekwu, sị: Igwe ọkụ Equiano na-etinye St Helena na maapụ dijitalụ, ebe anyị ka nọ na-enweghị COVID, mmetụta nke ọrịa zuru ụwa ọnụ pụtara na anyị ga-ewebata kwarantaini na usoro mgbochi ndị ọzọ na ókèala anyị, na-emetụta azụmahịa na njem nlegharị anya n'àgwàetiti ahụ. Ụbọchị a dị oke mkpa bụ oge dị mkpa mgbe anyị nwere ike ịhụ ọdịnihu nke mgbake na ọganihu n'ihu.
Alaka eriri St Helena dị ihe dị ka 1,154km ogologo, ọ ga -ejikọ agwaetiti ahụ na nnukwu ogwe eriri Equiano, na -ejikọ na Europe na ndịda Africa. Ngwa ga -esite na narị gigabits ole na ole ruo sekọnd ruo ọtụtụ terabits, ngwa ngwa karịa ọrụ satịlaịtị ugbu a.
Eriri ahụ ga -adị ndụ ozugbo etinyere ma tinye alaka St Helena na isi isi eriri USB Equiano; na ozugbo akụrụngwa mpaghara na ndị na -eweta ọrụ nọ ebe dị njikere ịkwaga na St Helena.
Nke a bụkwa ozi ọma maka Njem nlegharị anya St. Helena, onye otu Ndị njem nlegharị anya nke Africa